Ahoana ny fomba hitantanana ireo rakitra voageja ao amin'ny GNU / Linux? | Avy amin'ny Linux
Kitiho sy esory ao amin'ny GNU / Linux: Sary asongadina
Ity famoahana ity dia natao hanolorana torolàlana na boky torolàlana momba ny fampiharana sary sy terminal hafa amin'ny fitantanana rakitra voadidy amin'ny GNU / Linux Operating Systems (OS) sy ny fomba ampiasana azy ireo hahatratrarana ny fampiasana azy ireo mahomby sy mahomby kokoa.
Ny sasany amin'ireo rindranasa efa misy ao amin'ny GNU / Linux, indrindra ny sary, ankoatry ny maimaimpoana, misokatra ary maimaimpoana, dia sehatra maro sy endrika marobe ihany koaNoho izany, matetika izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny Windows na MacOS ary mifanaraka amin'ny endrika famatrarana maro an'isa amin'ny Operating Systems hafa.
1.1 Ny fizotrany
1.2 Ireo teknika
2.1 Avy amin'ny Terminal
2.1.1 Fomba fametrahana
2.1.2 Misy fampiharana azo
2.2 Tontolo iainana sary
2.2.4 Sehatra marobe
2.2.5 Ny hafa maimaimpoana, misokatra na maimaim-poana ho an'ny Windows
Na ho an'ny mpampiasa iraisana na ho an'ny mpampiasa efa mandroso, ary indrindra ho an'ny teknisianina na manam-pahaizana momba ny solosaina, Ny fitantanana sy ny fitehirizana ny fampahalalana dia raharaha lehibe sy marefo izay mila fiheverana sy laharam-pahamehana. Ary amin'ity faritra ity, ny fahalalana sy ny fampiasana ny fomba tsara indrindra na ny fampiharana ho an'ny famoretana sy ny famoahana ny angona fitaovana dia ilaina.
Hatramin'ny fotoana rehetra, Izay tahirin-kevitra amin'ny fitaovana na fotodrafitrasa rehetra mazàna dia mila tahiry, afindra, zaraina ary arovana mihitsy aza, amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fomba na fampiharana ireo., satria manatsara sy manamora ireo asa ireo izy ireo, manatsara ny fotoana sy ny loharanon-karena eny amin'ny habakabaka. Ary mazava ho azy fa raha mampiasa na manodikodina fampahalalana marobe na fampahalalana sarobidy isika, izany dia mampitombo ny fotoana hampiasana azy sy ny loza mety hitranga amin'ny fomba rehetra.
Noho izany, Ny famatrarana / famongorana ny rakitra dia rafitra na teknika tena tsara ampiasaina hampihenana ireo fotoana, habaka, fiarovana ary olana manokana amin'ny fitantanana angona voatahiry sy ampiasaina. Satria ny famatrarana dia mamela ny rakitra hatao kely kokoa noho ny habeny, hany ka kely kokoa ny toerana ilain'izy ireo ary azo alamina (kopia / hafindra) haingana kokoa, ary milamina sy mitokana.
Ny fomba na ny fampiharana tsirairay dia mazàna mampiasa algorithma matematika samihafa amin'ny famoretana / famoahana, ny sasany tsara kokoa na mahomby kokoa, mandaitra na azo antoka noho ny hafa. Amin'izao fotoana izao dia misy safidy maro karazana azo isafidianana amin'ny rafitra fiasa manokana, ary na dia iray aza amin'ny maro, izany hoe, sehatra maro izy ireo. Ary na eo aza ny fari-pahaizana malalaka misy, dia misy endrika na teknikan'ny famatrarana maro toy ny: Tar, Zip, ary Rar.
Ny teknikan'ny famatrarana dia ampiasaina mba hampihenana ny habaky ny angona rehetra amin'ny ankapobeny, toy ny antontan-taratasy na fampirimana feno azy ireo miaraka amina endrika iray na maromaro amin'ny fotoana iray., fa izy ireo koa dia ampiasaina amin'ny tranga, ohatra, ny horonan-tsary, audio ary sary, hahazoana fihenan'ny habe, matetika manolo-tena ny kalitaony (vahaolana), ary amin'izany dia hitsitsy ny habaka kapila sy hanamorana ny fidirana amin'ny mitovy amin'ny Internet amin'ireo fitaovana ireo izay tsy misy fifandraisana maivana na maoderina (hafainganana).
Farany, tokony homarihina fa ny algorithma matematika ankehitriny sy samihafa ho an'ny famoretana dia mahatonga ny angon-drakitra hipetraka kely kokoa amin'ny kapila, mampiasa dingana roa izay fantatra amin'ny hoe: Fanerena tsy misy fatiantoka ary famatrarana Lossy. Ireo karazan-tsindrona roa samy manana ny tombony sy ny fatiantoka misy azy, izay azo hadihadiana amin'ny zavatra vita an-tsoratra hafa amin'ny Internet.
Araka ny efa nambarantsika teo aloha Ny ecosystem an'ny fampiharana ankehitriny amin'ny fitantanana ny famindrana ny fisie (rakitra) sy ny angona amin'ny ankapobeny an'ny Users sy ny Operating Systems dia tena malalaka, indrindra ao amin'ny GNU / Linux, noho izany dia holazainay eto ambany izy ireo, manasaraka azy ireo ho sokajy 2: Terminal sy tontolo iainana an-tsary.
Avy amin'ny Terminal
Amin'ny alàlan'ny terminal dia apetraka matetika ny fampiharana arakaraka ny Distro izay anaovana azy. Ohatra:
Misy fampiharana azo
Na dia mety maro aza, ny be mpahalala sy be mpampiasa indrindra, ary maro amin'izy ireo no apetraka amin'ny toerana misy anao, amin'ny ankamaroan'ny fizarana GNU / Linux dia:
arj: (boky / pejy)
bzip2: (boky / pejy)
gzip: (boky / pejy)
lhasa: (boky / pejy)
lzip: (boky / pejy)
lzma: (boky / pejy)
p7zip: (boky / pejy)
feno p7zip: (mpitari-dalana)
sharutils: (boky / pejy)
rar: (boky / pejy)
tara: (boky / pejy)
unace: (boky / pejy)
unrar: (boky / pejy)
maimaim-poana: (boky / pejy)
unzip: (boky / pejy)
xz-utils: (boky / pejy)
Zip: (boky / pejy)
Zoo: (boky / pejy)
Azonao atao ny manindry ny anaran'ny fampiharana voalaza etsy ambony raha te hiditra amin'ny "Library DEBIAN Packages Library" hianaranao ny momba azy, ny firafiny ary ny fisiany., na eo akaikin'ny tsirairay amin'izy ireo hiditra amin'ny "Manual DEBIAN Manual (Manpages)" mitovy amin'izany, mba hampitombo ny fampiasana azy, indrindra ny momba ny syntax an'ireo baiko baiko azo tanterahina.
Tontolo iainana sary
B1 Archiver maimaim-poana
Ny hafa maimaimpoana, misokatra na maimaim-poana ho an'ny Windows
Araka ny hitanao izao, ny fampiharana azo alaina ao amin'ny GNU / Linux dia maro, na ho an'ny Terminal fotsiny, ampiasain'ny mpampiasa mandroso na teknika, na ho an'ny tontolo misy sary, ampiasain'ny mpampiasa tsotra na ny olon-drehetra amin'ny tanjona tsotra. Mahavita miasa miaraka amina endrika marobe, ary ny hafa misy amin'ny OS maro miaraka.
Fa na inona na inona isan-karazany misy, sy ny fampiasana, ny asany ary ny fahaizany marobe, Antenainay fa ity boky ity dia manatanteraka ny tanjony hampahafantatra anao ny fisian'izy ireo. ary manome anao ny fahafaha-manararaotra ny mety ho an'ny tsirairay. Ary raha te-hanontany ianao lahatsoratra bilaogy mifandraika amin'izany fahazoan-kevitra ireto 2 ireto: Ahoana ny famoretana sy ny famoahana ny rakitra ao amin'ny Linux y Miaraka amin'ny faran'ny terminal: Kitiho ary esory ny rakitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fomba hitantanana ireo rakitra voageja ao amin'ny GNU / Linux?
Lahatsoratra tsara, tiako raha azonao atao ny manao lahatsoratra momba ny fametrahana Peazip amin'ny Linux ary asehoy ny fomba fampidirana izany amin'ireo mpitantana rakitra toa an'i Nautilus / Files ao Gnome sy Dolphin ao amin'ny KDE.
Ok, misaotra tamin'ny tolo-kevitra.
GauGAN: Ny NVIDIA AI dia mamadika ny sarisary ho lasa velaran-tany fotorealista